Fifaninanana manao horonantsary: Aterineto ho an’ny Fandriam-pahalemana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2010 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, македонски, বাংলা, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, Español, Swahili, English
Voatodro ho isan'izay handray ny Loka Nobel 2010 ho an'ny Fandriampahalemana ny Aterineto. Ao anatin'ny adihevitra ao amin'ny fanampiana entin'ny aterineto amin'ny fiaraha-monintsika, Condé Nast sy Google Ireland dia niaraka nikarakara ity fifaninanana manao horonantsary ity ary dia hanana tombony hitety toerana sy hahita ireo horonantsariny handeha amin'ny MTV Italiana ny mpandresy.
Ireo fizotran'ity fifaninanana ity dia tena tsotra, raha mila ireo fepetra sy ny zavatra harahina amin'izany dia araho ny rohy:
Tsy tokony hihaotra ny dimy (5) minitra ny horonantsary rehetra;
Ny horonantsary, na teny inona na teny inona, dia tsy maintsy hadika amin'ny teny Anglisy; tsy maintsy azo vakiana tsara ireo fandikana ary mifanaraka amin'ilay fifamalian-dresaka;
Tsy maintsy mifantoka amina fanehoana tsara ny maha fitaovana tsara ho amin'ny fandriam-pahalemana ny aterineto araka ny voamarika ao amin'ny Hetsiky ny Aterineto ho an'ny Fandriam-pahalemana (I4P Manifesto) mivoaka ao amin'ny fantson'ny www.youtube.com/internetforpeace.
Ny fotoana farany hametrahana ireo horonantsary dia ny 1 Septambra, nefa ireo fisafidianana sy ny lazan'ireo horonantsary navoaka ireo dia hojerena hahitana ny mpandresy, noho izany raha tsy namoaka ny horonantsarinao ianao, ataovy haingana izany! Afaka mijery ny rantin'ireo efa tafavoaka ihany koa ianao ary mifidy izay tianao.
Ireo mpitsara Gilberto Gil, Yoani Sanchez, Gabriele Salvatores, Ory Okolloh, Ai Wei Wei, Nobuyuki Hayashi (Nobi), Nadine Toukan dia hifidy horonantsary iray izay hibata ny fandresena amin'ny fifaninanana, ho jerena amin'izany ny hatsaran'ny famoronana, ny fandrindrana teknika, ny laharana misy azy amin'ny safidin'ireo mpifdy, ny mampiavaka azy ary ny fanehoany ny I4P manifesto.
Ireto misy horonantsary roa an'ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana:
Vondrona Palestiniana sy Israeliana tanora izay niara-niasa nandritra ny 3 taona mihira ary manao horonantsary an-kira miresaka mikasika ny Fandriam-pahalemana.
Yuri avy any Rosia manao horonantsary mikasika ireo fanakianana befahatany ao amin'ny firenena sy ny hoe ahoana no ahafahan'ny aterineto manampy handrodanana azy ireny sady mampiseho ny momba momba ny olona amin'izao fotoana.
Noho izany jereo ny horonantsarin'ny Hetsiky ny Aterineto ho an'ny Fandriam-pahalemana ary mihetseha ka mandraisa anjara, alefaso ny fandraisan'anjaranao ary fidio ireo tena tianao!